Aynu Lacag Sameysano: 8 Dariiqo Oo Loogu Bedelayo Isku Socodka Baraha Bulshadda Iibin | Martech Zone
Jimcaha, Agoosto 17, 2018 Isniin, Oktoobar 18, 2021 Anna Bredava
Iibinta warbaahinta bulshada ayaa ah damaca cusub ee ku takhasusay suuqgeynta adduunka oo dhan. Ka soo horjeedda caqiidada duugoobay, iibinta warbaahinta bulshada waxay faa'iido u yeelan kartaa warshad kasta - macno malahan haddii dhagaystayaasha aad bartilmaameedsatay ay tahay millennials ama jiilka X, iskuulleyda ama milkiileyaasha ganacsi ee waaweyn, hagaajiyayaasha, ama macallimiinta kulliyadda. Iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah inay jiraan wax ku saabsan 3 bilyan oo isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada adduunka oo dhan, runti ma dhihi kartaa ma jiraan dad jecel inay iibsadaan badeecada dhexdooda? Shaqadaadu waa inaad raadiso dadkan.
Marka la barbardhigo suuqgeynta dhaqanka, iibka warbaahinta bulshada ayaa leh faa iidooyin badan - kanaalkaan isgaarsiinta waa mid jaban oo waxaa loo arkaa inuu yahay mid dhab ah oo lagu kalsoonaan karo, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon beddelaad. Uma baahnid inaad ereygeyga u qaadato - bal fiiri inta ay le'eg tahay shirkaduhu waxay ku kharash gareeyaan suuqgeynta warbaahinta bulshada. Marka sidee dhab ahaan u adeegsataa warbaahinta bulshada si aad macaash u hesho?
Falanqee Nidaamka Iibkaaga
Cilmi baaristu waa xurmada barakeysan ee suuq geynta - waxba ma iibin kartid adigoon si qoto dheer u fahmin sida qofka jeclaan lahaa inuu iibsado badeecadaada uu u dhaqmo una gaaro go'aano. Taasi waa sababta, ugu horreyntii, uguna muhiimsan, waxaad u baahan tahay inaad falanqeyso habka iibka ee ka dambeeya jilitaankaaga iibka.
Su'aalaha aad u baahan tahay inaad isweydiiso si aad u falanqeyso fursadahaaga iibka warbaahinta bulshada waa:
Waa kuwee channels ayaa hada keenaya jihooyinkaaga masraxaaga?
Waa maxay habka iibka?
Waa imisa? waqtiga ma waxay qaadataa in la xidho heshiiska?
Jawaabaha su'aalahan ayaa kula yaabi kara: waxaa laga yaabaa inaad ogaato inaad diiradda saareysay jaangooyooyin qaldan oo dhan. Xaaladdan oo kale, waxaad u arki kartaa inay faa'iido u leedahay inaad sameyso cilmi-baaris yar oo loogu talagalay inaad ku doorato habka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada ee ganacsigaaga.
Waad ku sameyn kartaa adigoo raacaya dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada ee tartamayaashaada oo aad aragto barnaamijyada ugu qiimaha badan iyaga, laakiin waxaa jira qaab wax ku ool ah oo qurux badan oo lagu sameeyo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa aalad dhageysi bulsheed sida Awariyo. Iyada oo aad ku kormeeri kartid sheegitaanka erey kasta oo muhiim ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada iyo shabakadda waqtiga dhabta ah.
Aynu nidhaahno waad samaynaysaa SaaS bilowga - waxaad uun gelisay "bilow" mid ka mid ah ereyadaada muhiimka ah oo arag melaha ay ka hadlayaan wax badan iyo, sidaa darteed, doodo dheeri ah oo ku habboon badeecadaada. Habkaas waxaad awoodi doontaa inaad fahamto halka bartilmaameedkaagu yahay iyo inaad mudnaanta siiso kanaallada ku habboon.
Maskaxda ku hay in warbaahinta bulshada aad caadi ahaan u gaarto iibsadayaasha suurtagalka ah ee hore ee nidaamka iibka: hadda marxaladda wacyigelinta calaamaddu waxay u qaybsan tahay saddex (soo-gaadhis, saameyn iyo ka-qaybgal). Taasi waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad qaabeyso istiraatiijiyadda iibinta warbaahinta bulshada si waafaqsan.
La soco oo Dhiiri geli Dib u eegista Warbaahinta Bulshada
Da'da xayeysiinta dhaqameed ayaa soo afjarmeysa - baraha bulshada ayaa dib u soo celiyey habka ugu wax ku oolka badan ee saameyn ku leh dabeecadda wax iibsiga qof. Yaab waxa ay tahay? Waa hadalkii afka. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay Nielsen, 92% dadka ku kalsoonow talooyinka saaxiibbada iyo qoyska ee dhammaan noocyada kale ee suuq-geynta, iyo 77% macaamiisha waxay u badan tahay inay iibsadaan shey cusub markay ka baranayaan asxaabta ama qoyska. Waa wax dabiici ah inaad dooratid inaad ku aaminto dadka aad taqaanid nooc ka badan.
Warbaahinta bulshada waa meel ku habboon suuqgeynta gudbinta: dhammaan barnaamijyadan waxaa loogu talagalay inay noo ogolaadaan inaan saaxiibadeena la wadaagno khibradaha iyo natiijooyinka cajiibka ah. Marka waxaad u baahan tahay inaad sameyso si aad lacag uga hesho waa inaad ku dhiirrigeliso dadka inay wax ku soo qoraan khibradooda. Xitaa waxaad ku siin kartaa dhiirigelin yar, sida qiimo dhimis yar ama muunad.
Ha iloobin inaad ka jawaab celiso dhammaan dib u eegista, mid togan iyo mid tabanba. 71% macaamiisha kuwaas oo khibrad wanaagsan u leh adeegga warbaahinta bulshada oo leh summad waxay u badan tahay inay kuwa kale kula taliyaan. Hawlgelinta warbaahinta bulshada ee firfircoon ee dhanka astaanta waxay abuureysaa xiriir ka dhexeeya astaanta iyo macaamilka waxayna ka dhigeysaa inay dareemaan inay maqlaan, taas oo muhiimad weyn u leh haynta.
Qaado Iibsiga Bulshada
Kaliya maahan inay dadku jecel yihiin inay ku wadaagaan fikradahooda ku saabsan sumadaha warbaahinta bulshada, waxay sidoo kale inta badan u jeestaan ​​warbaahinta bulshada si ay u helaan talooyin. Halkaas waxaad hore ugu lahayd hogaamiyayaal suuragal ah - kaliya waxaad u baahan tahay inaad aqoonsato. Waxaad ka heli kartaa iyada oo la kormeerayo bulshooyinka khuseeya sida kooxaha Facebook, subreddits, twitter chat ect. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa aaladda dhegeysiga bulshada taas, laakiin hubi inay leedahay wax la mid ah Habka raadinta Boolean, taas oo kuu ogolaaneysa inaad habeysid weydiimahaaga si aad raadintaada uga dhigto mid sax ah oo dhameystiran isla waqtigaas.
Adiga oo tixgelinaya xaqiiqda ah in marar badan aad u jawaabi doonto shisheeyaha aan horay u soo gaadhin astaantaada, waqtigaaga qaado. Si toos ah ha ugu gelin garoonka iibka qiirada leh - weydii su'aal, sharax sida ay uga faa'iideysan karaan badeecadaada, adeegso cod iyo cod ku habboon madal iyo codsigooda, oo isdhexgalkan ka dhig mid macno leh oo dhab ah. Sidan ayaad aad ugu dhowdahay inaad saamayn ku yeelato go'aankooda intii aad u diri lahayd farriin goyn-cookie ah hoggaan kasta oo aad heli doonto. Dabcan, u fududee inay wax iibsadaan - sii xiriir, kaas oo si toos ah ugu horseeda sheyga.
Ku wanaaji Jidkaaga Warbaahinta Bulshada in loo beddelo
Ka hadlida xiriirinta, aad bay muhiim u yihiin. Waxaan nahay macaamiil caajis ah oo inta badan u baahan in loo sheego sida iyo meesha laga gato badeecada la rabo. Haddii macmiil suurtogal ah uusan kaliya gujin karin iskuxirka websaydhkaaga isla markiiba, waxay aad ugu dhowdahay inaysan ku mashquulin raadinta.
Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad geliso xiriiriyeyaasha mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah astaamahaaga oo aad ka dhigto mid muuqda. Haddii aad soo dhejineyso boostada xayeysiinta - ku xir meeshaas, haddii aad si caadi ah u sheegto mid ka mid ah badeecadahaaga - sidoo kale ku xir xiriir halkaas. Xataa markaad ka jawaabeyso tixraacyada, oo aan horay uga wada hadalnay, waxaad xiriirin kartaa badeecad laga hadlayo.
Waxaad ubaahantahay inaad kadhigto wadada loo rogo bedelka sida ugu macquulsan.
Dib-u-eegid ku sameyso Boggaaga Degitaanka ee Warbaahinta Bulshada
Markaad hoggaan hesho, waxaad rabtaa inaad hubiso inay hal ilbiriqsi oo keliya u jiraan beddelidda. Waxay noqon doontaa wax laga xumaado in la abuuro istiraatiijiyad iib ah oo warbaahinta bulshada ah oo la yaab leh oo kaliya in habka iibka loo joojiyo marxaladda ugu dambeysa. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay bog deg deg ah oo hubaal ah oo ku qancin doona macmiilkaaga mustaqbalka inuu sameeyo go'aan wax iibsi. Waa kuwan waxyaabo yar oo aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso dib u eegista boggaaga degitaanka:
Xawaaraha xamuulka Macaamiisha kaliya ma ahan kuwa caajis ah, sidoo kale waa dulqaad la'aan (waan ka xumahay, macaamiisha!). Waxay filayaan boggaaga inuu soo raro 3 ilbiriqsi, Halka celceliska waqtiga rarku yahay 15. Marka hubso inaysan sugin!
Gaaban iyo fudud. Looma baahna in la qoro sabab kasta oo sababta badeecadaadu ay ugu fiican tahay faahfaahin kasta. Ma doonaysid inaad ku mashquusho macmiilkaaga suurtagalka ah dhammaan macluumaadka dheeriga ah. Ka dhig fariinta ku soo celinta qiimahaaga mid fudud oo nadiif ah oo ku dheji macluumaad dheeri ah tabs gaar ah oo ogeysiis ah - taasi waa intaas.
Mar labaad, kalsoonida iyo gudbinta Si aad u buuxiso beddelaad waxaad u baahan tahay kalsoonida macaamiisha. Kalsoonida ayaa aad muhiim ugu ah go'aanka iibsadaha. Hubso inaad haysato astaantaada ama markhaatigaaga macmiilka heer-indhood mid ka mid ah dhinacyada ama cinwaanka - meel ay si dhakhso leh u arki karaan iyadoon loo rogin.
Samee Beddel jilicsan
Sidii aan hore uga wada hadalnay, hogaamiyaasha warbaahinta bulshada waxay galaan hoolka iibka ka hor hogaamiyayaashii hore. Sababtaas awgeed, waxaa laga yaabaa inaysan diyaar u ahayn inay qaataan go'aanka wax iibsiga, laakiin taasi micnaheedu maahan inaad iyaga dayaci karto.
Halkan waxaad ka abuuri kartaa fursado loogu beddelo jilicsan. Habka caadiga ah ee loo sameeyo waa in la bixiyo liis gareynta emaylka. Dabcan, waa inaad qiil ugu sameysaa macaamiisha adoo siinaya iyaga madadaalo iyo waxyaabo qiimo leh. Sameynta waxyaabo soo jiidasho leh oo muujinaya sida badeecadaadu u shaqeyso (casharro iyo daraasado kiis) ayaa ah hab fiican oo loogu beddelo hoggaamiyeyaashan jilicsan iibsadayaasha mustaqbalka.
Isbeddel cusub oo soo ifbaxaya ayaa hadda ah suuqgeynta farriinta, sidaa darteed, halkii aad ka codsan lahayd dadka inay isku qoraan joornaalkaaga, waxaad si fudud u weydiisan kartaa rukhsad aad ugu dirto iyaga. Waxaa la xaqiijiyay in dadku ay u badan tahay inay fariin ka aqriyaan baraha bulshada marka loo eego emaylka. Daraasaduhu waxay muujinayaan in barnaamijyada farriimaha la dirayaa ay leeyihiin sicir furan, akhriska iyo CTRs illaa 10X kuwa emaylka iyo SMS-ka ah. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ku gaadheysaa iyaga meesha saxda ah ee ay markii ugu horraysay kala soo baxeen astaantaada - warbaahinta bulshada.
Ku dar Baaq-Ficil Ficil ah
Haddii aadan waxba weydiisan - waxba ma heli doontid. In kasta oo mararka qaarkood ay umuuqato in wacitaan-ficil uu aad u riixi karo, waa xeelad aad wax ku ool ah haddii aad si sax ah u sameyso.
CTA -gaagu waa inuu ahaadaa mid cad oo ku habboon boostada - habkani wuxuu u muuqan doonaa mid dabiici ah oo habboon. Waxay noqon kartaa casuumaad inaad ka tagto faallo oo aad la wadaagto fikirradooda, wax badan ka baro mowduuca, ama dhiirigelin si aad u iibsato alaabtaada. Ku darista CTAs boggaaga Facebook waxay kordhin kartaa heerka-guji-ilaa 285%. Ha iloobin inaad hubiso in haddii aad ku darto wax xiriiriyeyaal ah, bogaggaaga degitaanku ay ku habboon yihiin beddelka degdegga ah.
Sii Waxyaabaha Ka Reebban Bulshada
Ka dib oo dhan, sida ugu wanaagsan ee lagu helo macaamiil cusub ayaa ah in la bixiyo wax u gaar ah beddelkeeda - dadku waxay jecel yihiin inay dareemaan inay yihiin qayb ka mid ah koox la doortay. Habka ugu cad ee tan loo sameeyo waa in la siiyo qiimo-dhimis taageerayaashaada-malaha inta badan ma sameyn kartid, laakiin sida heshiis hal-mar ah si aad u soo jiidato hoggaamiyeyaal cusub, waxay u shaqaysaa sixir.
Hab hal abuur leh (oo ka jaban) ayaa noqon doona in lagu qabto tartan ka dhex socda kuwa raacsan. Tusaale ahaan, GarkaBrand wuxuu awooday inuu ku kobciyo joogitaankiisa bulshada 300% wuxuuna ku labanlaabay liiskiisa emaylka wax ka yar hal usbuuc tartan internet oo si fiican looga fikiray. Waxaad weydiisan kartaa kuwa raacsan inay la wadaagaan oo ay dib u soo daabacaan boostadaada ama ay ku abuuraan nuxurkooda alaabtaada ama adeegga ku jira. Waxaad ku dilaysaa laba shimbirood hal dhagax-inaad hesho soo-gaadhitaan badan iyo kuwa raacsan iyo sidoo kale uruurinta waxyaabaha ay isticmaaleyaashu soo saareen oo aad u adeegsan karto labadaba iibkaaga warbaahinta bulshada iyo ololeyaasha suuq-dhaqameedka mustaqbalka.
Tags: gadhka xiiranbaaris booleanhab raadinta booleanwaddada beddelashadaKooxaha Facebookkaaliyaha xiriiriyesuuqgeynta farriintalacagfaallo bulsheedwarbaahinta bulshadabogga soo degitaanka warbaahinta bulshadawadada warbaahinta bulshada ee diintadakhliga warbaahinta bulshadaiibinta warbaahinta bulshadaiibinta bulshadabeddelaad jilicsansubredditssheekaysiga twitter
Anna Bredava waa Khabiir ku takhasustay Suuqgeynta Baraha Bulshada Awariyo. Waxay wax ka qortaa suuq-geynta dijitaalka ah, isbeddelada warbaahinta bulshada, suuq-geynta ganacsiga yar yar iyo aaladaha caawiya qof kasta oo daneynaya suuq-geynta